खुसीको खबर उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई अब अस्पताल होइन, आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरिने – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/खुसीको खबर उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई अब अस्पताल होइन, आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरिने
खुसीको खबर उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई अब अस्पताल होइन, आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरिने
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा थपिने कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल नभएर सोझै आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले तीन वटा ठाउँमा दुई हजार संक्रमितलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सुरू गरिएको जानकारी दिए। ‘कीर्तिपुर, खरिपाटी र मनमोहन अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने।
यी तीन ठाउँमा कहाँ कति बेडको आइसोलेसन बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।
काम अघि बढाउँदै भएका बेडमा थप कति बेड बढाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले निगरानी गरिरहेको छ।मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, ‘हामीले ठ्याक्कै कति क्षमताको बनाउने भनेर टुंगो गरेका छैनौं। अहिलेलाई दुई हजार बनाउने भन्ने हो तर त्यहाँ ठाउँ र क्षमता हेरेर तीन हजार पनि पुग्नसक्छ।’
उनले तीन वटै ठाउँमा बेडहरू तयारी अवस्थामा रहेका जुनसुकै बेला पनि बिरामी भर्ना गर्न सकिने जनाए।
खरिपाटीमा भने सुरूआतदेखि नै क्वारेन्टिनको लागि प्रयोग गरिँदै आइएको विद्युत प्राधिकरणको भवनलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउन लागिएको छ।
अहिले पनि त्यहाँ तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गरिएर ल्याइएका नेपालीहरूलाई राखिँदै आइएको छ।गत फागुन ४ गते चीनको वुहानबाट १ सय ८५ नेपालीलाई उद्धार गरेर खरिपाटी क्वारेन्टिनमै राखिएको थियो।
मन्त्रालयले मनमोहन अस्पताललाई पनि आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भएको छ।
उपत्यकामा चार वटा अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुँदै आएको छ। जसमा टेकु अस्पताल, पाटन अस्पताल, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र दुवाकोटस्थित केएमसी अस्पताल छन्।
अहिले भने यी अस्पतालमा संक्रमितको चाप बढेकाले थप संक्रमितहरूलाई भर्ना गर्न समस्या भइरहेको छ।
टेकु अस्पतालमा मात्र अहिले ३६ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जसमा ६ जनाको आइसियूमा उपचार भइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए। उनले आइसियूमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूमा श्वासप्रश्वास र रक्तचापको समस्या देखिएको बताए।
टेकु अस्पतालसँग जम्मा ५० जना बिरामीलाई राख्ने क्षमता छ। जसमा ३० जना आइसोलेसन र २० जना आइसियूमा राख्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ।
अब अस्पतालले थप १४ जना संक्रमितलाई मात्र भर्ना गर्नसक्छ।
यस्तै पाटन अस्पतालमा पनि ५५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जसमा ४ जनालाई आइसियूमा भर्ना गरिएको छ। आजै मात्र किस्ट अस्पतालमा संक्रमण देखिएका एक जना गर्भवतीसहित चार जना बिरामीलाई पनि पाटन अस्पताल नै ल्याइएको छ।
अहिले उपत्यकामा भेटिने संक्रमित सबैलाई यही चार वटा अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिँदै आइएको छ।
अब भने यी अस्पताल पनि संक्रमितले भरिन थालेपछि सरकार उपत्यकामा आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटेको छ।
उपत्यकामा पछिल्लो समय संक्रमित संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। अहिलेसम्म उपत्यकामा ३ सय बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जसमा काठमाडौंमा १ सय ९६, ललितपुरमा ५७ र भक्तपुरमा ४३ जना छन्। बिहीबार मात्र ललितपुरका चार जनासहित उपत्यकामा पाँच जना संक्रमित थपिएका छन्।
पछिल्लो समय उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ र स्थानीयमा समेत संक्रमण देखिएकाले थप संक्रमित बढ्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले सरकारले काठमाडौंमा व्यापक रूपमा परीक्षण बढाउनुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्। सरकारले पनि उपत्यकामा समुदायमा संक्रमण पुगेको हो वा हैन भनेर यकिन गर्न विभिन्न १० ठाउँका १५ बढी मानिसको परीक्षण कार्य सुरू गरेको छ। जसमा तीनकुने, कोटेश्वर र नख्खुका २ सय बढी मानिसको परीक्षण गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले पनि उपत्यकाका बाँकी ठाउँहरूबाट आउने नतिजाले संक्रमणको कुन अवस्था हो भन्ने यकिन हुने र सोही अनुसार रणनीति तय गरिने जनाए।
उपत्यकामा थप संक्रमित बढ्न सक्ने देखिएपछि अस्पतालहरूले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारले आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सुरू गरेको हो। त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्खरै मात्र लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्न सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ।
उक्त मापदण्ड अनुसार अब संक्रमितहरू आफ्नो इच्छा अनुसार घरमै बस्न पाउँछन्।
यद्यपी मन्त्रालयले लक्षणविहीन वा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई जबरजस्ती घरमा राख्ने भनेको छैन।
यदि संक्रमितले इच्छाएमा मात्र घरमा बस्न दिइने नत्र आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरिने भनिएको छ।
प्रवक्ता गौतमले भने, ‘संक्रमित हुनेबित्तिकै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्दैन। अहिले पनि अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको हो। लक्षण कडा देखिए वा स्वास्थ्यमा समस्या आएमात्र अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अब त्यसरी नै संक्रमितहरूलाई आइसोलेसेन सेन्टरमा भर्ना गर्छौं।’
खतिवडाको अभिव्यक्तिले कुलमानको पुनर्नियुक्तिमा कस्तो संकेत गर्छ ?
भर्खरै आयो दुखत समाचार: कुरा गर्ने क्रममा एक्कासी मोबाइल पड्किँदा दुई छोरासहित आमाको मृत्यु
मन्दिर जान चढेको तुइन छिन्दा महिला बेपत्ता
”को’रोना महा’मारी’लाई लिएर नेपा’लमा भ’यो अहिले सम्मकै डर’लाग्दो पु’ष्टि, दे’शैभर त’रंग अ’ब के हुन्छ ?
काठमाडौवाट हेटौंडा जाँदै गरेको स्कार्पियो र मोटरसाइकल पहिरोमा पुरीयो : चालकको नि´धन, २ जना घा´ईते